Bernie Sanders nwere ike ịgba iwu marijuana n'ụzọ iwu nke ụbọchị mbụ?
Ndi Bernie nwere ike hazie ya otu ubochi?
Hazie Cannabis Site na Ntinye Iwu
Bernie Sanders ga-emebi marijuana n'ụbọchị otu? Gee ya nti na PodCast ma obu Lelee YouTube na Bernie Sanders na-akwado iwu wii wii site na Iwu Onye isi na onebọchị nke mbụ. Chọpụta ma ọ ga - eme ya n'ezie - ọ bụrụhaala na o meriri Donald Trump na ntuli aka nke 2020 - yana kwa na o meriri ọchịchị onye kwuo uche ya ọbụlagodi dịka o mere na ọgbaghara nke Iowa.
More Banyere Iwu Ewu.
Zitere Post: Ozi Dispensary - Pịa Ebe a.
"Bernie Sanders kwuru na ya chọrọ ịkwụsị 1% nke na-enweghị mmasị n'iwu nkwado cannabis ma nye ya 98% nke ahụ. Onweghikwa ijeri ndị na-egbochi ya igbochi wii wii site na iji usoro iwu - mana enwere ike ịme iwu ahụ?
Ndewo, a bụ m Tom, ị ga - ahụta m site na ịka onye ọka iwu cannabis na ịpị m mkpokọta ụlọ ọrụ cannabis ụlọ ọrụ ọka iwu.com - akụ maka ịmụtakwu banyere ụlọ ọrụ - nke na-ewetara anyị - Can Bernie Sanders nwere ike ikwuwapụta cannabis iwu site n'aka onye isi ihe?
Akụkụ nke abụọ nke usoro iwu ahụ nyere ikike ka ndị isi mmanye mee ihe iwu. Donald Trump chere na edemede nke abụọ ga - enyere ya aka ime ihe ọ bụla chọrọ - ma ntaramahụhụ impeachment na Senate na-egosi nke ahụ. Kedu ihe ederede nke abụọ kwuru kpọmkwem - ọ bụghị ọtụtụ: ọ ga-elezi anya na a ga-emezu iwu. Nkeji edemede 2 Nkebi 3.
Kedu ihe bụ iwu ndị isi ama ama ama? Mkpọpụ nke nchụpụ na 1863 - nke pụtara na Abe Lincoln ga-abụrịrị na o chere na ịbụ ohu enweghị iwu - n'agbanyeghị ngbanwe nke iri na atọ na-anaghị eme ruo mgbe 13.
Ha ebidoghi ịbụ onye a na-akpọ Ndị isi Iwu ruo 1907. Na 1952 - Onye isi oche Truman debere ihe niile igwe nchara n'okpuru nchịkwa gọọmentị - yabụ bernie sanders ga-eme ihe n'ụzọ na-erughị onye ọhaneze ma mezie iwu cannabis site na ntinye iwu?
Gini bu ikike Onye isi oche ndi isi ala?
Ihe Trumans mere tere aka - ọ na-achọ ịme iwu kama ịkọwapụta ihe ahụ. Iwu a na-achịkwa na - ebo ndị ọka iwu ikpe ka ọ hazie ihe ndị ọzọ site na usoro nhazi - nke pụtara n'ụzọ bụ isi ngalaba na - ahụ maka ọrụ nwere ike ịgbanwe usoro iheomume - mana ha nwere ike ịpụfe usoro a?
Ọ bụrụ na Bernie kwenyere n'ihe m nọ na-ekwu kemgbe, na igbochi wii wii bụ iwu megidere iwu agbụrụ agbụrụ na-emeghị ihe ndabere ya na ule ụta maka onye omebe iwu. Ihe ọ ga - eme bụ mmezi ọrụ nke ịkwado ụkpụrụ iwu na usoro nhọpụta ahụ ndị Omeiwu mere na 1970?
Kedu ihe ma ọ bụrụ na nke ahụ gafere oke - nke ọma, Congress nwere ike ime ihe iji kwughachi iwu nchịkwa ya - mana site na iwepu cannabis na CSA - nke ọma, nke ahụ agaghị efu gị ihe ọ bụla. N'ihi ya, ha ga-ebo ya ebubo. Ikekwe steeti nwere nnukwu akụkụ - dịka Idaho ma ọ bụ Indiana ga-ebo ndị US akwụkwọ. Nke ahụ ga-ewe oge iji rụpụta ihe.
Yabụ ọ bụrụ na Bernie kwenyere na usoro ịme Marijuana ugbu a bụ ihe enweghị iwu na esemokwu agbụrụ na mmanye na mbido nke iwu kwadoro nkwenye ya - ijide n'aka na ọ ga - eme ya.
Mana o nwere ike kwụsịchaa nke ahụ ma duzie nchịkwa ya ka ọ ghara ịkagbu iwu marijuana gọọmentị maka na nnukwu nsogbu ndị isi na-eche ihu na-ebilite mgbe ndị isi oche na-eji ike ha eme ihe site na ịme iwu na-enweghị nkwenye ọgbakọ ma pụọ ​​na ikike ndị dị adị.
Ihe kpatara Bernie Sanders nwere ike iji nye iwu Marijuana Site na Iwu Executive
N'ọnọdụ ahụ - ọ nwere ike ịme ya n'ụzọ ọ bụla - mana ọ nwere ike ọ gaghị ekwe mmemme ya ma ọ bụrụ na aka ya dị na iwu.
Ikekwe ịkpa oke nke onye isi ala nwere ike ịrụ ọrụ - dịka ọmụmaatụ iduzi nchịkwa ya ka ọ ghara itinye iwu wii wii kama ịme mmezi iwu na iwepụ ya na CSA.
Ọ ga - abụrịrị mgbagha - Dị ka mgbe na 1940 anyị ejikọtara ndị America America ma tinye ha n'ogige.
Or mgbe anyị Eisenhower desraregled ụlọ akwụkwọ ọha. Iwu ndị ahụ na-arụ ụka n'oge ahụ - mana ọbụghị aka.
Iwu nkwado Cannabis bụ ihe a ma ama - nke na - ewu ewu nke na m ga - egosi gị ka ị meriri ihe ndị masịrị ma denye aha na akụkọ akụkọ cannabis. Wenezdee na elekere abụọ nke ehihie.
Yabụ ebe ahụ ị nwere ya - Bernie nwere ike ide akwụkwọ maka isi
Ada mba m - ọ bụ ihe ọjọọ ịntanetị:
Bernie kwere nkwa inyeju wii wii iwu nke ụbọchị mbụ ọ nwere ike ịme ya?
Nke: David Silvers
N'uhuruchi nke Caocuses Iowa, Senator Bernie Sander (I-VT) kwere nkwa iji debanye wii wii na steeti iri ise ọ bụla n'akwụkwọ ụbọchị mbụ ya n'ọchịchị, “site na ntinye aka.” Sanders kwekwara nkwa iwepu ihe ndekọ nke ndị mmadụ ejidere maka ihe onwunwe, ikekwe ọ bụ mmụọ nsọ sitere na Gọvanọ Pritzker nke Illinois kwalite ya.
Dịka nkwa nkwa niile, enwere ụfọdụ ihe mgbochi iwu na ndị bara uru. Iwu a na-achịkwa achịkwa, nke gbochiri wii wii na ọkwa gọọmentị. Enweela a ogologo akụkọ ihe mere eme nke mgbalị ndị dara ada iji mejupụta cannabis n'okpuru CSA. Ndị CSA nwekwara -enye ohere Onye ọka iwu General ka ịmalitegharịa cannabis site na usoro nchịkwa, si otú ahụ gafere Congress. Agbanyeghị, usoro a na-emebi emebi dị ogologo ma bụrụ nke iwu, ọ bụghịkwa ihe Sanders ma ọ bụ onye ọ bụla nwere ike ịnagide ụbọchị mbụ. Echefula na Sanders nwere ike ọ gaghị enwetara onye ọka iwu Attorney General otu ụbọchị.
Enwere ohere ọzọ. N'afọ 2013, osote onye ọka iwu General James Cole, na-eje ozi na Nchịkwa Obama, wepụtara akara ngosi maka "Nduzi gbasara Mgbakọ Marijuana" nke a na-akpọkarị Ndekọ Cole. Cole Memo mebere atumatu na Ngalaba nke Ikpe Zighachi mmebe CSA na steeti ndị mebiri marijuana. Na 2018, mgbe ahụ, Attorney-General General Jeff Sessions kwụsịrị Cole Memo ma hapụ itinye aka na CSA ka ikike nke ndị na-ekpechitere gọọmentị etiti obodo. Ihe ode akwụkwọ Attorney General Sọrọ bụ otu peeji dị ogologo, nke na-egosi otu esi adị mfe iwu gọọmentị etiti nwere ike ịgbanwe.
Anyị nwekwara ike nweta ụfọdụ nghọta si mpaghara iwu dị iche, ya bụ mbata na ọpụpụ ọpụpụ. Nlekọta onye ochichi nke Obama guzobere usoro iwu mbata na ọpụpụ abụọ, DAPA (Nkwupụta akpọrọ maka ndị nne na nna nke ndị America) na DACA (Nkwupụta Ego maka Oge Childmụaka biara). DAPA na DACA na-guzobere n'echiche nke Uche nke ikpe, ma ọ bụ echiche na ndị mmanye iwu nwere ikike ikpebi mgbe a ga-etinye iwu ahụ dabere na nchebara echiche dị ka ihe mgbochi akụ na ụba nke ịda iwu. N'ikwu okwu niile, DAPA na DACA bụ mmemme gọọmentị jiri mebie iwu ụfọdụ mbata na ọpụpụ na-emegide ụdị mmadụ niile.
A gbara DAPA aka rue Courtlọikpe Kasị Elu na ikpe 2015 Texas na United States, ebe ngalaba 4 - 4 nke Courtlọikpe hapụrụ ihe omume ahụ. Recentlylọ ikpe Kasị Elu nụrụ na ihe ịma aka maka DACA na Ngalaba Homeland Security v. Ederede nke Mahadum California, na mkpebi nke echere na June 2020. Ọ bụ ezie na nke a bụ ikpe mbata na ọpụpụ, ọ nwere ike ịgwa anyị ọtụtụ ihe gbasara gọọmentị etiti, ma ọ bụ n'okwu a Onye isi ala Sanders, nwere ike jụ itinye iwu nke iwu gọọmentị niile.
Gịnịkwa maka atụmatụ Bernie ịgbaghara ọtụtụ mmadụ a mara ikpe na-egbu wii wii? Nke ahụ yiri ka ọ bụ ajụjụ kwụ ọtọ karị. Ejiri ikike mgbaghara Onye isi ala kpuchie na Nkeji edemede II, Nkebi 2, Nkebi nke 1 nke Iwu United States. Ọ na-enye nzizi na “[ya] Onye isi ala… ga-enwe ike iji nye ntaramahụhụ na mgbaghara maka mmejọ megide United States, belụsọ n'ụkpụrụ nkwụmọtọ.” Agbanyeghị ikike mgbaghara Onye isi ala nwere naanị ntaramahụhụ gọọmentị (yabụ agaghị etinye ya na ntụrụndị wii wii), a na-anabatakarị na enweghị iwu ndị ọzọ bara uru na mgbaghara Onye isi ala.
N’ezie, nke a niile nwere ike bụrụ nke a na-akọkarị- anyị amaghị ma aga-enwe Onye isi ala Bernie, ma ọ bụ ọbụlagodi onye Democratic Nominee Bernie. Ma dị ka ihe bara uru na iwu? Okike yiri ka ọ na-egosi nke ahụ Ee Ọ Nwere Ike!